Thulo Parda / Sano Parda | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 91
महोत्सवमा बढ्यो शिशिरको व्यस्तता, रोल्पा रोगले रोकिरहेको छ सिने क्षेत्रको सक्रियता ।
शिशिर भण्डारी, सञ्चारकर्मीसँगै कमेडीयन र कलाकार पनि हुन् । रेडियो अडियो सुन्ने र टिभी फिल्मी हेर्नेका लागि शिशिर भण्डारी, केहि वर्ष अघि देखिकै परिचित नाम हो । चलचित्र ह..
चलचित्र विकास बोर्ड सदस्यमा केसी नियुक्त गरीएपछि सुरेश दर्पण यसरी जंगीए ।
चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा कलाकार उत्तम केसी नियुक्त भएका छन् । सुरेश दर्पण पोख्रेल पाँच महिनादेखि अमेरिकामा रहेका कारण सदस्यमा केसीलाई नियुक्त गरीएको हो । बोर्ड सदस..
ड्रीम्सको गीतमा अनमोल र साम्राज्ञीको रोमान्स
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ड्रीम्सको नयाँ गीत सार्वजनीक भएको छ । करिब १० लाखले ट्रेलर हेरीसके पछि चलचित्रको गीत सार्वजनीक गरिएको हो । गीतमा नायक अनमोल केसीले नायिका साम्राज्..
हाँस्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त भएका छन् । निगमले आज आफ्नो तीन वर्षे सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मुन्द्रेलाई ..
पहिलो पटक पोखरामा यसरी सार्वजनीक भएको थियो पशुपति प्रसाद
चलचित्र पशुपति प्रसाद आउँदो शुक्रबार (माघ १५) देखि प्रर्दशनमा आउँदैछ । चलचित्रको ट्रलेरले अहिले दर्शकको ध्यान तानीरहेको छ । यद्यपी, पशुपति प्रसादको व्यापार कस्तो होला ?..
करिश्मासँगै अरु को को छन्, बाबुरामको नयाँ शक्तिमा ?
नायिका करिश्मा मानन्धर नयाँ शक्तिको अन्तरीम परिषद्मा समावेश भएकी छिन् । डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनीक गरेको नयाँ शक्तिको अन्तरीम परिषद् सूचीको पाँचौ नम्बरमा करिश्मा म..
सेन्सर गर्नेले नै मन पराए पशुपति प्रसाद
आउँदो शुक्रबार (माघ १५) देखि प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र पशुपति प्रसादले सेन्सर गर्नेहरुकै मन तानेको छ । चलचित्र सेन्सरका क्रममा चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) का सदस्यहरुले नै पशुपति प्रसाद मन पराएको बताइएको छ । चलचित्र सबैले हेर्न मिल्ने खालको बनेकाले शुभकामनासहित पशुपति प्रसादलाई युनीभर्सल सर्टिफिकेट प्राप्त भएको छ । दिप..
मुन्द्रेको न्यानो कोसेली (फोटो फिचर)
हाँस्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) ले भूकम्प पिडितलाई न्यानो सिरक कोसेली दिएका छन् । जाडोले समस्यामा परेका आफ्नै गाउँका ८७ परिवार भूकम्प प्रभावितलाई उनले न्यानो सिरक कोसेली दिएका हुन् । आफ्नो जन्म स्थान सिन्धुपाल्चोक फुल्पीङडाँडा गाविस ५ र ७ मा उनले एक लाख रुपैँया बराबरको सिरक वितरण गरेका छन् । न्यानो सिरक पाउनलेमा ५२ दलित [&he..
बालमैत्री अभियानप्रति धुर्मुस सुन्तलीको आर्कषण
हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) बालमैत्री अभियानप्रति आर्कषित भएका छन् । सामाजीक काम र सरसफाईमा सक्रिय धुर्मुस सुन्तली, पहिलो बालमैत्री नगरपालिकाको अवलोकन पश्चात यसप्रति आर्कषित भएका हुन् । नवलपरासीस्थीत देशकै पहिलो बालमैत्री सुनवल नगरपालीका अवलोकन पश्चात उनीहरुले सिंगो देशलाई बालमैत्री बनाउने अ..
शुसांकले ऋचालाई भने, तलाईँ अंगालो मारिराख्न त सक्दिन नी ।
शुसांक मैनाली र ऋचा शर्माको जोडी चलचित्र टलकजंग भर्सेज टुल्केबाट नै जमेको हो । टुल्केमा फुलीको रुपमा देखिएकी ऋचा र सुकेको रुपमा देखिएका शुसांकको अभिनय प्रशंसनीय थियो । यो जोडी फेरी पर्दामा दोहोरीएका छन् । फागुन ७ देखि प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र को आफ्नोमार्फत जोडीको रुपमा देखिने भएका हुन् । चलचित्रमा ऋचा शर्मालाई चिन्नै गाह्र..
चकलेटलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो पत्र
सामाजीक कामका लागि भन्दै निर्माण गरिएको चलचित्र चकलेटले दर्शकको सोचे जस्तो माया पाउन सकेन । यहि झोकमा चलचित्रकी निर्मात्री एवं नायिका पुजना प्रधानले फेसबुक समेत नचलाउने घोषणा गरीन् । उनको यो निर्णय धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । यद्यपी, पुजनाले फिल्म प्रर्दशनमा ल्याउन पूर्व नै चलचित्र चले पनि नचले पनि आफुले आँटेको सामाजीक काम गरेरै छ..
हेर्नुहोस्, हेरी रहुँ लाग्ने प्रेमी गीतको पोस्टर भिडियो ।
प्रेम दिवसमा हरेक प्रेमील मन छुनका लागि प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र प्रेम गीतको अहिले व्यापक चर्चा छ । चलचित्रको सार्वजनीक गीत, संगीत र ट्रेलरले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने अपेक्षा पनि त्यहि हिसाबमा गरिएको छ । बजेटमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरी निर्माण गरिएको प्रेम गीतलाई हेर्न लायक बनाएको निर्माण पक्षको दाबी छ । जुन कुरामा केहि सत्यता र..
चिसो मौसमलाई तातो बनाउन पलले आँचललाई के के गरे ? (भिडियोसहित)
जाडो निकै बढेको छ । न्यानोको खोजी सर्वत्र छ । यस्तै खोजीमा देखिएका छन्, मोडल तथा नायक पल शाह । चिसो चिसो मौसमलाई तातो तातो बनाउन पलले आगो, हिटर र न्यानो लुगाको विकल्प खोजेका छन् । जाडो मौसममा आफ्नो प्रेमीकासँग घुम्न जाँदा तातो हुने उनको बुझाई छ । आफ्नो मायालुलाई अँगाल्दै तातो चिया वा कफीको […]
मुसहरले चिनेन् धुर्मुस सुन्तलीलाई
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) पर्दामा देखिन थालेको वर्षौँ बिते । लोकप्रीय बनेका उनीहरुले राष्ट्रिय कलाकारको उपमा पाए । दर्शक हँसाए । शुभेच्छुक बटुले । देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि कलाकारलाई माया गर्नेहरु बढे । राष्ट्रको गहना भनेर पुकार्न थाले । टेलिभिजन हेर्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने र इन्टरनेट चलाउनेका लागि धुर..
माघ २५ र २६ मा भक्तपुरमा देखिँदैछन्, पृथ्वीनारायण शाह
पृथ्वी नारायण शाह माघ २५ र २६ गते भक्तपुरमा देखिने भएका छन् । विष्णुवीर मन्दिर पुन निर्माणका लागि पृथ्वी नारायण शाह भक्तपुरमा देखिने भएकाहुन् । वास्तवीक पृथ्वी नारायण शाहलाई भेट्न त अहिले असम्भव छ तर पर्दाका पृथ्वीनारायण शाहलाई मन्दिर पुन निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन विशेष शो मार्फत देखाइने भएको हो । पृथ्वीनारायणले किर्तिपुर आक्र..